Apha ndandidibana yam enye nesiqingatha. Enkosi kuba elikhulu ulonwabo ukuba esinazo ngoku. Ndandidibana umntu dreamed yakhe wonke ubomi, athi yena uziva ngathi usasebenzisa ngendlela efanayo. Mna kuba ndinovelwano ukuba siyazi ngamnye ezinye ixesha elide, kwaye yonke imihla yethu ubomi ngoku wazaliswa luvuyo. Na injongo, Nadia siyabulela ukuba uphelelwe kwaye okwenzayo enjalo emangalisayo umsebenzi, ekuncedeni abantu ukufumana ngamnye ezinye kule omkhulu ehlabathini.
Kwento yonke wam ezandleni Nadia (i-Brazil) ngaphambi koko, ukuba umntu wandixelela ukuba ukufumana uthando kwi-Internet kukuba real kwaye baya kuba wasuka wahleka. Kodwa ngoku ndiyazi ukuba imimangaliso kwenzeka ngenxa ndafumanisa a boyfriend, Simon, kunye aid yakho kwiwebhusayithi. Thina kuhlangatyezwana nazo kwi-umntu, kwaye thina ndeva ukuba sasisazi ngamnye ezinye wethu wonke ubomi. Sonke thina kufuneka inikwe ukufumana ngamnye enye, kwaye saye kuyo. Namhlanje sino kunye ecinyiweyo zabo zabucala kwi-umqondiso ka-ngokubhekiselele ngamnye enye. Ndiyabulela kuba sibonisa kwethu indlela nganye enye. Ndinqwenela onke amanye amadoda nabafazi ukufumana uthando lwakho apha.
Na Injongo, Daria
Molo. Ndingathanda Zichaziwe wam personal imibulelo wonke umntu abo wadala neli site. Ndicinga ukuba wam oyikhethileyo, kwaye ngoku bazalwana abathandekayo umyeni ukungena kwam. Thina kuhlangatyezwana nazo apha, waqala uthetha. Siya kusetyenziswa zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo zanamhla uthungelwano. Kwaye ekugqibeleni, emva kweminyaka dialogue kwaye iintlanganiso, silifumene watshata ngonovemba, kwaye ndiza iselwa ndonwabe. Kwakunzima kuba nam ukuqonda kwaye sikholelwa ekubeni ngamazwe kwi-Intanethi Dating ngenene umsebenzi. Nabani na olilungu ikhangela uthando, ndinga lokucebisa ngaphandle hesitation ukubhalisa. Ndithe sele advised zonke bahlobo bam ukuyenza. Kunye iminqweno engcono, Irina
← Brazilians ukususela matriarchal isixeko ikhangela grooms Wam iplanethi
Isijapani Dating - simahla →